September 16, 2021 1151
टिकटक बनाउने क्रममा सेती नदीमा खसेर तनहुँमा एक कि`शोरी बेपत्ता भएकी छन् । शुक्लागण्डकी नगरपालिका–८ लालिमकी १९ वर्षीया पवित्रा लम्साल बेपत्ता भएको इला`का प्रहरी कार्यालय बेल चौताराले जनाएको छ ।
शुक्लाग`ण्डकी नगरपालिका–८ पुलचो`कस्थित सेतीनदी किना`रमा रहेको रक गार्डेनमा टिकटक बनाउने क्रममा उनी खसेर बेपत्ता भएकी हुन् । आफ्ना दुई साथीसँग घुम्नका ला`गि पुलचोक गएकी लम्सालको नदीमा खसेर बेपत्ता भएपछि स्थानीयवासी र नेपाल प्रहरीको सहयोग`मा खोजी भइरहेको इलाका प्रहरी कार्यालय बेल चौतराका प्रहरी निरीक्षक ज्ञानबहादुर खड्काले जानकारी दिए ।
घुम्ने क्रममा साथीहरु`सँग टिकटक बनाउन नदी छेउमा रहेको ढुङ्गामा उभिएकी लम्साल अचानक चिप्लि`एर नदीमा खसेको उनीसँगै गएका साथी`हरुले बताएको उनले बताए । लम्साल अचानक चिप्लि`एर नदीमा खसेपछि उनका साथीहरुले प्रहरीलाई खबर गरेपछि तत्कालै खोजी का`र्यमा खटिएको उनले जान`कारी दिए ।
केही दिन अघि मात्र विवाह भए`की लम्साल दुल्हन फ`र्काउन माइत आएकी थिइन् । मंगलबार दिउँसो दुई साथीहरूसँग घुम्न सेती नदीमा रहेको रकगा`र्डेन पुगेकी थिइन् । उनका अनुसार ३ जना साथीहरू सहित सेतीको किनारको रक गार्डेन`मा फोटो र टिकटक बनाउन गएकी लम्साल नदीमाथिको पुल`को बीचबाट खसेर बेपत्ता भएकी हुन् ।
घुम्ने क्रममा साथीहरूसँग टिकटक बनाउन नदी छेउमा रहेको ढुङ्गा`मा उभि`एकी लम्साल अचानक नदीमा ख’सेको उनीसँगै गएका साथीह`रूले बताएको उनले बताए । लम्साल अचानक नदीमा ख’सेपछि उनका साथीहरूले प्रहरीलाई खबर गरे`पछि तत्कालै खो`जी कार्यमा खटिएको उनले जानकारी दिए ।
Prevबिहे भएको ५ दिन नबित्तै टिकटक बनाउँ’दै गर्दा खोला’ले ब’गाएपछि परिवारमा रु’वाबासी (भिडियोसहित)
Nextविमानभित्रै दुई युवाले यस्तो हर्क`त देखाउन थालेपछि… (भिडियोसहित)
आज सुनको मूल्य घट्यो ? तोलाको कतिमा कारोबार हुँदैछ ? हेर्नु`होस्
आज सुन कतिमा कारोबार भइरहेको छ ? हेर्नुहोस्..